Xulka Puntland oo awood ku muquuniyey Koofur Galbeed, xilli ay kasoo baxday guruubka A,+ SAWIRRO – Gool FM
Xulka Puntland oo awood ku muquuniyey Koofur Galbeed, xilli ay kasoo baxday guruubka A,+ SAWIRRO
jilacow July 17, 2016
(Muqdisho) 17 Luuliyo 2016 –Xiddigaha maamul goboleedka Puntland ayaa gaaray guushoodii ugu horeysay, ciyaaraha maamul goboleedyada Soomaaliya oo ka soconayo magaalada Muqdisho.
Putland ayaa kullan aad u xiiso badan waxa ay galabta wajahday dhiigeeda Koofur Galbeed, waxaana qeybtii hore ee ciyaarta lagu kala nastay 2-0 oo ay ku hoggaamineyaan Puntland, waxaana labada gool dhaliyay xiddiga weerarka ee Yacquub Cismaan.
Markii dib la isugu soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta ayaa wiilasha Putland waxa ay halkooda kasii wadeen kubaddii qurxooneyd iyagoo la yimid labo gool kale waxaana u dhaliya xiddiga Dhakab Gureey Yamani, halka goolka labaad uu sii raacsaday Yacquub Cismaan, waxaana ciyaarta waqtigii loogu tala galay ay kusoo dhamaatay 4-0 oo ay guusha ku qaateen Putland.
Koofur Galbeed ayaa isaga haray tartankaan markii loogu adkaaday 9-0, labadii kullan ay ciyaareen tartanka doowlad goboleedyada Soomaaliya, waxaana ay ku guuldarreysteen in ay shabaqa gool taabsiiyaan.
Xiddiga weerarka Putland ee Yacquub Cismaan ayaa noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee saddexleey ka dhaliyo tartankaan, isagoo hoggaaminayo gool dhallinta.
Sikastaba guruubka A, waxaa kasoo baxay Banaadir iyo Putland, iyagoo kullan loogu ordayo kaalinta koowaad ay wada ciyaari doonaan Tallaadada soo aadan oo ay taariikhdu ku began tahay 19-7-2016 .
Mancehster United oo ku qasban in ay lacag badan siiso Bastian Schweinsteiger hadii ay iibineyso
DHEGAYSO:Barnaamijka Falanqaynta Ciyaaraha ee Gool FM(Kaga bogo waraysiyo wasiiro,xildhibaano,agaasimayaal sports oo ka hadli doona tartanka maamul goboleedyada Somalia(Tabintii Baliil)